Deni oo furay kal-fadhiga 47aad ee Baarlamanka Puntland [DAAWO]
Deni oo furay kal-fadhiga 47aad ee Baarlamanka Puntland
GAROWE, Puntland - Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Axad ah si rasmi ah u furay kal-fadhiga 47aad ee Gollaha Wakiiladda Puntland, isagoo ka jeediyay khudbad uu uga warbixiyay horumarka dowladda iyo safaradii shaqo ee uu ku tagey degmooyin katirsan Puntland, Muqdisho, Baydhabo, Kenya iyo Jabuuti.
Deni ayaa sheegay in guulo ay kusoo dhamaadeen dhawaan safaardii uu sameeyay tan iyo bishii lasoo dhaafey, wuxuuna kahor sheegay Gollaha Wakiiladda in COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dakhliga dowladda, isku socodka iyo howlihii shaqooyinka Wasaaradaha.
Madaxweynaha ayaa warbixin ka siiyay Xildhibaanada arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya xiliga kala-guurka ah iyo heshiiskii doorashadda ee madaxda Maamullada iyo Madaxweyne Farmaajo.
Halkan ka Daawo Khudbadda Deni:
Wuxuu balan-qaadey inay xoogga saari doonto dowladdiisa sidii Puntland uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah, oo dowladaha hoose lagu soo dooran doono, iyadoo hanaanka dimuqraadiyeynya uu meel fiican marayo, lana diiwaan-geliyay xisbiyo siyaasadeed.
Dhanka amniga, Ciidamada Puntland ayaa ku guuleystay dagaallo ay kooxaha argagaxisadda kula galeen dhulka buuralayda ee gobolka Bari, islamarkaana ay kahor tageen falal ka dhan ah xasiloonida.
Baarlamanka Puntland ayaa soo dhaweeyay heshiiskii doorashadda Muqdisho lagu gaarey 17-kii bishii September, kaasoo lagu soo afjaray khilaaf mudo dheer ka taagnaan hanaanka doorashooyinka.
Gudoonka Gollaha Wakiiladda Puntland ayaa ku dhawaaqay guddi ka shaqeynaya.
Puntland oo lagu bogaadiyay doorkeeda heshiiska doorashadda
War Saxaafaded 22.09.2020. 12:01
"Maalin baan Yariisow kula kaftamay in siyaasadu tahay fuud Ari iyo Kafey"
Soomaliya 03.08.2019. 10:04